Tantara: Jesosy Zaza tao Amin’ny Tempoly - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
JEREO ilay zazalahy kely miresaka amin’ireo zokiolona. Mpampianatra ao amin’ny tempolin’Andriamanitra ao Jerosalema ireo. Ary ilay zazalahy dia i Jesosy. Efa nitombo kelikely izy. Roa ambin’ny folo taona izy izao.
Talanjona aoka izany ireo mpampianatra noho ny nahalalan’i Jesosy zavatra betsaka erỳ momba an’Andriamanitra sy izay voasoratra ao amin’ny Baiboly. Nefa nahoana no tsy eto koa i Josefa sy Maria? Aiza izy ireo? Aoka hojerentsika.
Isan-taona dia mitondra ny ﬁanakaviany ho any Jerosalema i Josefa mba hanatrika ny fankalazana manokana atao hoe Paska. Lavitra ny lalana avy eo Nazareta mankany Jerosalema. Tsy nisy nanana ﬁara ary tsy nisy ﬁarandalamby. Tsy nanana ireo ny olona tamin’izany fotoana izany. Nandeha an-tongotra ny ankamaroan’olona, ary nila teo amin’ny telo andro izy mba hahatongavana tany Jerosalema.
Izao i Josefa dia nanana ﬁanakaviana lehibe. Nisy koa zandrin’i Jesosy lahy sy vavy sasany tsy maintsy nokarakaraina. Tamin’io taona io àry i Josefa sy Maria dia niara-niainga tamin’ireo zanany hanao ny dia lavitra niverina tany Nazareta. Nihevitra izy fa niara-dia tamin’ny hafa i Jesosy. Nefa rehefa nijanona izy tamin’ny faran’ny andro, dia tsy nahita an’i Jesosy. Nitady azy teo amin’ireo havany sy sakaizany izy, nefa tsy teo amin’ireo izy! Koa niverina tany Jerosalema izy ireo mba hitady azy tany.
Farany dia hitany teto niaraka tamin’ireo mpampianatra i Jesosy. Nihaino azy ireo izy ary nametraka fanontaniana. Ary talanjona ny olona rehetra noho ny fahendren’i Jesosy. Nefa hoy i Maria: ‘Anaka, nahoana no nanao izao taminay ianao? Sahiran-tsaina erỳ izahay sy rainao niezaka nitady anao.’
‘Nahoana no nitady ahy ianareo?’, hoy ny navalin’i Jesosy. ‘Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho ato an-tranon’ny Raiko aho?’
Eny, tian’i Jesosy ny ho eo amin’izay azony ianarana momba an’Andriamanitra. Moa tsy izany va no tokony ho ﬁhetseham-pontsika koa? Rehefa nody tany Nazareta i Jesosy dia zatra nankany amin’ireo ﬁvoriana mba hivavaka isan-kerinandro. Noho izy nihaino tsara mandrakariva, dia nianatra zavatra maro avy ao amin’ny Baiboly izy. Aoka isika hanahaka an’i Jesosy ary hanaraka ny ohatra navelany.
Lioka 2:41-52; Matio 13:53-56.
Entin’i Josefa manao inona ny ﬁanakaviany isan-taona?
Ahoana no hanahafantsika an’i Jesosy eo amin’ny ﬁanarana momba an’Andriamanitra?
Iza ireo efatra mirahalahy iray tam-po tamin’i Jesosy voatonona ao amin’ny Baiboly? Ary inona no andraikitry ny roa taminy, teo anivon’ny ﬁangonana kristianina? (Matio 13:55; Asa. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jak. 1:1; Joda 1)
Nitaintaina i Josefa sy Maria rehefa tsy nahita an’​i Jesosy. I Jesosy indray gaga hoe nahoana izy ireo no tsy tonga dia nahita ny nisy azy.